सरकारले ८ हजार ८ सय जनालाई स्वरोजगार बनाउन तालिम, एक दिनकै भत्ता ९५० रुपैयाँ
काठमाडौं । सरकारले प्रतिव्याक्ति ९ सय ५० रुपैयाँ दैनिक भत्ता दिएर ८ हजार ८ सय मानिसलाई निःशुल्क तालिम दिएर स्वरोजगार बनाउने भएको छ । उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको घरेलु तथा साना..
थोरङ्ला पास नगरी फर्कने पर्यटकको संख्या किन बढ्यो ?
बेसीशहर । लमजुङ–गोरखा सिमानामा पर्ने मनास्लु आरोहण गरेर लमजुङबाट बाहिरिने पर्यटकको संख्यामा वृद्धि भएको छ। मनास्लु आरोहणको लागि गोर्खाबाट प्रवेश गरेका पर्यटक लमजुङबाट बाहिरिनेको संख्यामा वृद्धि भएको हो। आठ हजार १६३..
सरकारी सेवाको अवसरः उड्डयन प्राधिकरणले माग्यो १४१ जना कर्मचारी
काठमाडौँ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले १४१ जनशक्ति पदपूर्तिका लागि विज्ञापन आह्वान गरेको छ। खुला तथा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा पदपूर्ति हुनेछ। लोक सेवा आयोगको परामर्शमा प्राधिकरणले बुधबार विज्ञापन प्रकाशन गरेको हो।..
विद्युत् प्राधिकरणले माग्यो ४ सय ५५ जनाका कर्मचारी, मिटर रिडरदेखि १० तहसम्म
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले देशभर ४५५ जनाका लागि जागिर खोलेको छ । प्राधिकरणले आज एक सार्वजनिक सूचना मार्फत रोजगारीका लागि आवेदन दिन आह्वान गरेको हो । प्राधिकरणले १० औं तहका..
मेगा बैंकमा रोजगारीको अबसर : माग्यो ११३ जना कर्मचारी
काठमाडौ । मेगा बैंकले १ सय १३ जना कर्मचारी माग गरेको छ । बैंकले शाखा प्रबन्धक सहित १ सय १३ जना कर्मचारी माग गरेको हो । शाखा प्रबन्धकका लागि स्नातकोत्तर उत्तिर्ण..
पाटन अस्पतालमा जागिर खुल्यो, सबैभन्दा बढी स्टाफ नर्स मागियो
काठमाडौं । पाटन अस्पतालले रोजगारीका लागि आवेदन माग गरेको छ । अस्पतालले बायोमेडिकल इन्जिनियरिङदेखि फार्मेसी टेक्निसियन पदका लागि आवेदन खुलाएको हो । अस्पतालले सबैभन्दा धरै १४ जना स्टाफ नर्सका लागि आवेदन..
ह्यात होटलको नाफा २८ करोड, प्रति शेयर आम्दानी १४ रुपैयाँ
काठमाडौं । तारागाउँ रिजेन्सी होटल्सले चालु आर्थिक बर्षमा २८ करोड सात लाख ७२ हजार रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ । कम्पनीको नाफा गत आर्थिक बर्षको यसै अवधिको तुलनामा दोब्बर भन्दा बढी..
कात्तिक १५ देखि स्याङ्जामा अन्तर्राष्ट्रिय प्याराग्लाइडिङ प्रतियोगिता
स्याङ्जा। कात्तिक १५ गतेदेखि स्याङ्जाको भिरकोट नगरपालिका– ५ स्वरेक मैदानमा अन्तर्राष्ट्रिय प्याराग्लाइडिङ प्रतियोगिता हुनेभएको छ । बाबु एडभेञ्चर क्लबको आयोजनामा हुने प्रतियोगितामा नेपालसहित २५ विदेशी मुलुकका झण्डै तीन सय खेलाडीको सहभागिता..
सरकारी सेवाको अवसरः नेपाल एयरलाइन्सले माग्यो १०६ कर्मचारी
काठमाडौँ। नेपाल वायुसेवा निगमले खुला प्रतिस्पर्धाबाट १०६ जना कर्मचारीको पदपूर्तिका लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ। लोकसेवा आयोगको सहमतिमा निगमले आइतबार पदपूर्ति सूचना प्रकाशित गरेको हो। खुला तथा समावेशी रुपमा पदपूर्ति हुनेछ। निगमले..
नेपाली सेनामा दुई हजार सात सय जनालार्इ जागिरको अवसर
काठमाडौं। नेपाली सेनाले रिक्त रहेको दरबन्दीमा दुई हजार ६०१ जना कर्मचारी माग गरेको छ। सेनाले सहायक पण्डित हूद्दा, अमल्दार, सैन्य, सैन्य ड्राइभर, कूचिकार, सूचिकार, चर्मकर्मी, केशकर्तक, धोवी, सिकर्मी माली र..
मुस्ताङ । विश्वकै सबैभन्दा अग्लो स्थानमा रहेको भनी चिनिएको तिलिचो ताल समुद्री सतहदेखि ४,९१९ मिटर अग्लो स्थानमा रहेको छ । सो तालमा जान अब हिमालपारिको जिल्ला मुस्ताङबाट जोमसोमको ठिनी हुँदै ५,१२०..
रेमिट्यान्सबाट भित्रियएको रकम ७ प्रतिशत मात्रै व्यवसायमा
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीको क्रममा विप्रेषणबाट प्राप्त सात प्रतिशत रकम मात्रै व्यापार, व्यवसायमा प्रयोग हुने गरेको पाइएको छ । इस्टिच्युट फर इन्टिगे्रेटेड डेभलेपमेन्ट स्टडीज (आइआइडिएस) र इन्टरनेशनल एजेन्सी फर कन्ट्री इन्फरमेसन..
नेपाल प्रहरीमा ११ सयभन्दा बढीलाई रोजगारीको अवसर
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले विभिन्न तहमा ११ सयभन्दा बढीका लागि रोजगारीको अवसर खुल्ला गरेको छ । नेपाल प्रहरीले प्रहरी निरीक्षकदेखि प्रहरी जवानसम्ममा आवेदन खुल्ला गरेको हो । नेपाल प्रहरीमा नयाँ भर्नाका..
जागिर छैन ? भृकुटीमण्डप जानुस्, ‘जव् एण्ड करिअर फेयर’ हुँदैछ
काठमाडौं । बेरोजगार युवालाई रोजगारको अवसर जुटाउने उद्देश्यले ‘जव् एण्ड करिअर फेयर’ (जागिर र अवसर मेला) हुँदैछ । यही शुक्रबार र शनिबार दुई दिनसम्म चल्ने मेलामा रोजगारदाता र बेरोजगार युवाबीच..
इपिएस कोरियन भाषा परीक्षाको रिजल्ट आयो , १२ हजार १०८ जना पास
काठमाडौं । रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) भाषा परीक्षाको नतिजा प्रकाशित भएको छ । गत जेठ अन्तिम साता लिइएको भाषा परीक्षाको नतिजा आज प्रकाशित भएको हो । ६८ हजारभन्दा बढी परीक्षामा सहभागी..
काठमाडौं । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा वैदेशिक रोजगारीका ठगी तथा उद्धारसम्बन्धी घटनाका लागि ‘सहायता कक्ष’ स्थापना भएको छ । श्रम तथा रोजगारमन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरले यहाँ आज एक कार्यक्रमकाबीच सहायता कक्षको..
बैंकमा जागिर खाने हो ? सिभिल बैंकमा ६५ जनालाई अवसर
काठमाडौं । सिभिल बैंकले बिभिन्न पदमा ६५ जना कर्मचारीको माग गरेको छ । बैंकले ब्राञ्ज म्यानेजरमा १० जना, रिलेशनसिप म्यानेजरमा १० जना, रिलेशनसिप अफिसर १० जना, इन्टिग्रेटेड रिस्क अफिसर २ जना,..
साउदी अरबमा, कतारबाट गएका हजारौ गोठाला अलपत्र
काठमाडौं । कतारले साउदी अरबको मरुभूमिमा कार्यरत नेपालीसहित एसियन देशका गोठाला, कृषक कामदारहरु आधारभूत मानव अधिकारबाट बञ्चित भएको जनाएको छ । कतार मानव अधिकार समितिले कतारी नागरिकको साउदीमा रहेको खेतीपाती, ऊँट..
रिलायन्स लाईफ इन्स्योरेन्समा रोजगारीको अवसर
काठमाडौं । रिलायन्स लाईफ इन्स्योरेन्सले रोजगारीका लागि आवेदन माग गरेको छ । इन्स्योरेन्सले सिनियर म्यानेजरदेखि ट्रेनि असिस्टेन्टका लागि रोजगारीका लागि आवेदन माग गरेको हो । इन्स्योरेन्सले केहि संख्यमा सिनियर म्यानेजर, म्यानेजर..
‘बेरोजगारलाई भत्ता दिने विधेयक’ संसदीय समितिबाट पारित
काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ । समितिमा पेस भएको ८ महिनापछि मंगलवार बसेको समिति बैठकले..
एजेन्सी । कतार एयरवेजले आफुलाई बिगतका केही वर्षदेखिको गल्फ क्षेत्रको एक प्रमुख हवाई सेवाका रुपमा विकास गरिरहेको छ । यसले कतारको राजधानी दोहालाई एक प्रमुख ट्रान्जिट बनाउने गरेको छ । लगभग..
जागिर खोजीमा हुनुहुन्छ ? सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्समा अवसर खुल्यो
काठमाडौं । सानिमा लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले रोजगारीका लागि आवेदन माग गरेको छ । कम्पनीले रिजनल म्यानेजरदेखि जुनियर असिस्टेन्टका लागि आवेदन माग गरेको हो । कम्पनीले विराजनगर, विरगञ्ज, भद्रपुर, बुटबल, नेपालगञ्ज, धनगडी,..
साझा बसलाई भक्तपुरवासीद्धारा भव्य स्वागत
भक्तपुर । भक्तपुर र काठमाडौंको सिमानामा पर्ने मनोहरा पुलमा भक्तपुरका बासिन्दाको विहानैदेखि निकै तामझाम थियो । उपभोक्ताका नाममा ब्यानर बोकेका भक्तपुरका बासिन्दाले हातमा अबिर, र फूलमाला लिएर बसेका थिए । जब..
अब विदेशबाट निःशुल्क घरमा पैसा पठाउन सकिने, लाग्ने खर्च सरकारले बेहोर्ने
काठमाडौं । विदेशमा रहेका नेपाली कामदारले औपचारिक प्रणालीबाट स्वदेशमा रकम पठाउँदा लाग्ने शुल्क तथा कमिसन नेपाल सरकारले व्यहोर्ने भएको छ । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले यस्तो..
मुस्ताङ । पर्यटकीय मौसम सुरु भएसँगै मुस्ताङका होटल आन्तरिक पर्यटकले भरिभराउ भएका छन् । चैत महिनाको पहिलो सातादेखि पर्यटकको आवागमन बढेपछि जिल्लाका होटल अग्रिम बुकिङ हुन थालेका हुन् । अनुकूल मौसममा..
काठमाडौं । साझा यातायातले भक्तपुरमा ‘रुट परमिट’ माग गरेको एक महिना बित्दा पनि यातायात व्यवस्था विभाग वाग्मती अञ्चल कार्यालयले अनुमति दिएको छैन । साझाले फागुन ३० गते ‘रुट परमिट’ माग गर्दै..
२१ अर्ब ९० करोडमा दुई वटा वाईड बडी जहाज’ किन्न सरकार जमानी बस्ने मन्त्रीपरिषद्को निर्णय
काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषद्को विहीबारको बैठकले नेपाल वायु सेवा निगमको ‘वाईड बडी जहाज’ खरिदका लागि सरकार जमानी बस्ने निर्णय गरेको छ । निगमले गत चैत २५ गते अमेरिकी विमान कम्पनीसँग २१ अर्ब..
नयाँ वर्षमा लुम्बिनीमा पर्यटकको भीड, वैशाखको पहिलो दिन नै तीन लाख पुगे
लुम्बिनी । नयाँ वर्ष २०७४ को अवसरमा वैशाखको पहिलो तीन दिनमा विश्व शान्तिको मुहान लुम्बिनीमा झन्डै तीन लाख पर्यटकले अवलोकन गरेका छन् । विश्व प्रसिद्ध लुम्बिनीको अवलोकन, भ्रमणका लागि स्वदेशी तथा..
पर्यटकको आकर्षकको केन्द्र बन्दै छ शिवासन क्षेत्र, भौतिक संरचनाले तान्यो पर्यटक
पाल्पा । पाल्पा जिल्लाको बगनाँसकाली गाउँपालिकास्थित बराङ्दीको महामृत्युञ्जय शिवासन क्षेत्र पर्यटकीय गन्तव्य बन्दै गएको छ । महामृत्युञ्जय शिवासन क्षेत्रमा १४ फिट उचाइ, आठ फिट चौडाइको शिवको मूर्ति स्थापना गरेपछि धार्मिक तथा..
७५ हजार जनाका लागि म्यादी प्रहरीमा भर्ना आह्वान खुल्यो, साधारण लेखपढ जानेकाले आवेदन गर्न सक्ने
काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि सरकारले म्यादी प्रहरीमा भर्ना खोलेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले बिहीबार ७५ हजार म्यादी प्रहरीका लागि भर्ना आह्वान गरेको हो । साधारण लेखपढ गर्न..
Results 840: You are at page 16 of 28
१५ वर्षीया बालिकालाई युवती बनाउन सुई र औषधि प्रयोग, भारतमा लगेर बिक्री